အီရတ် အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို နိုင်ငံရေးပါတီများ ကန့်ကွက် - Yangon Media Group
အီရတ် အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို နိုင်ငံရေးပါတီများ ကန့်ကွက်
ဘဂ္ဂဒက်၊ စက်တင်ဘာ ၃
အီရတ်ပါတီများသည် မေလ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးဆုံးစဉ်ကပင် အချင်းချင်းနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်များဖြစ် ကြသော်လည်း အီရတ်အစိုးရသစ် ဖွဲ့စည်းမည်ကိုမူ ပါလီမန်တွင်း နည်းလမ်းဖြင့် ပူပေါင်းကာ ကန့်ကွက်သွားမည်ဟု စက်တင်ဘာ ၃ ရက်သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
သြဂုတ် ၂၈ ရက်က ကျင်းပခဲ့သော ပါတီများစုံညီတွေ့ဆုံပွဲ၌ အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ် ဟိုင်ဒါအယ်လ်အ ဘာဒီကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အီရတ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် မွတ်တာဒါအယ်လ်ဆာဒါဦးဆောင် သောပါတီကို ဝန်ကြီးချုပ် ဟိုင်ဒါ အယ်လ်အဗာဒီ၏ပါတီက မဟာမိတ် ပြုခဲ့လိုက်သည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သူ က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ပြိုင်ဘက်နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဟာဒီအယ်လ် အာမေရီနှင့် ယခင်ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်းဖြစ်သူ နျူရီအယ်လ်မာလီကီတို့က မိမိတို့ပါတီအချင်းချင်းပူး ပေါင်းကာ ပါလီမန်တွင် အင်အားကြီးမားသူများအဖြစ် ရပ်တည်နေ ကြပြီဖြစ်သည်ဟူ၍ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။ အီရတ်နိုင်ငံအပေါ်သို့ မည်သည့်နိုင်ငံခြားမှစွက်ဖက်မှုများကိုမဆို ဆန့်ကျင့်ကြောင်းနှင့် အီရတ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်သာလျှင် ရပ်တည်သွားမည်ဟု ထုတ် ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ှု အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များ၏ အီရတ်နယ်မြေပေါ်၌ ခါလီဖိတ်ဘာသာရေးမြို့တော်တည်ဆောက်ရေးမှာလည်း ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အီရတ်တွင် နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးအ ကြောင်းပြကာ အစိုးရသစ်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းရန်ပြင်ဆင်နေကြ၍ မိမိတို့သည် ယင်းကိစ္စရပ်အား ပါလီမန်တွင် ကန့်ကွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဂျပန်၌ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဂျေဘီ ဝင်ရောက် တိုက်ခတ်
ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေလှောင်တမံ(၃၉)ခုအနက် (၂ဝ)မှာ ရေပိုလွှဲမှ ရေကျော်နေ ဟုဆို
ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်များအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားဘဏ်များ သို့မဟုတ် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းမျ?
ဖလောရင့်စ်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ် ခံရပြီးနောက် ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်များ၌ အပျက်အစီ??
ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ခြံအမှတ် ၅၄ အမွေကိစ္စ ဦးအောင်ဆန်းဦးနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီအ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသန့်စင်မောင် ကလေးလေဆိပ်၊ မီးရထားဘူတာရုံနှင့် နေရဉ္ဇရာမြစ် မြစ်ကမ်းပြ??